DEG-DEG+AKHRISO: Isimmada gobalka Bari oo go’aan kasoo saaray dagaalkii DENI iyo DIYAANO, “PSF waxaa hoggaamin Diyaano” – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
DEG-DEG+AKHRISO: Isimmada gobalka Bari oo go’aan kasoo saaray dagaalkii DENI iyo DIYAANO, “PSF waxaa hoggaamin Diyaano”
January 11, 2022 Xuseen 52
Isimmada dhaqanka Puntland ee gobalka Bari ayaa ku dhawaaqay go’aano cusub la xariira xal u helida colaadii ka dhacday magaalada Boosaaso, iyo xalinta khilaafkii ka dhashay xil ka qaadistii Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu ku sameeyay Agaasimaha Hay’adda PSF Maxamuud Cismaan Diyaano.
Isimmada ayaa soo jeediyay in Agaasimaha Hay’adda PSF loo sii daayo Maxamuud Cismaan Diyaano, iyo 17% dhaqaalaha Dekedda lagu celiyo Dekedda Boosaaso, si loogu hormariyo magaalada Boosaaso.
Sidoo kale, Isimmada uu hoggaaminayo Boqor Burhaan ayaa soo jeediyay in Dowladda Puntland ay ka laabato heshiiskii DP World ay kula wareegtay Dekedda Boosaaso, maadama muddo 5 sano ah aysan waxba ka qaban.
Go’aankan kasoo baxay Isimmada gobalka Bari ayaa imaanaya xilli magaalada Boosaaso ay ku sugan yihiin Madaxweynayaashii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas iyo Cabdiraxmaan Faroole, iyo Isimmo fara-badan, oo ay hoggaaminayaan Suldaanka Guud ee Beelaha Harti Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan, iyo Islaan Bashiir Islaan Cabdulle.
Laamiga isku xira carmo iyo Boosaaso waxa iska leh oo ilaalin doona beesha cali selaybaan,dhaqalaha kasoo baxana waa in lagu hormariyo degmada carmo
Wakaas caqliga Jaajidu! ‘Hus iyo ban’. May Allah save and help Puntland.
Waan soo dhawaynayaa goaan isimada waxaan leeyahay guuleeysta
xushamd iyo adeec isimo kaama ahan ee waxan ay xar xariiqeen aad ka dhex aragtay burburka puntland oo aad jeceshahay laakiin ku bisharayso isimada caqligu fooraro oo gurigooda jooga ayaa deganada puntlnad difacooda tag kaadi u soo cabay oo hawdka galadi iyo wardheer dhaxanta u seexanyeen
Go’aanka sida ka muuqato waa mid aay gaareen Isimada reer Bari oo aaysan ka dhex muuqan isimadii kale ee kaga biiray Sanaag iyo Mudug iyo siyaasiintii Nairobi ka yimid!
Aniguse Waxaan la dhacay qodobka leh, Dekedda Boosaaso waa in aay dhistaan dadka reer Puntland iyo Soomaalida!
Laakiin warkaas ma aqbalayaa Denigii xitaa Imaaraad ugu daray in aay qaataan, Garoonkii uu dhisay Talyaaniga?!
Amarka ha laqaato isimadu waxay arkeen wax meesha yaala guul guul
Ma isimadii gobolka bari, ee uu hoggaaminayey isimka beesha Daarood/Soomaaliyeed, baa go’aamo cusub gaaray?!
Kaddib markii aan dhuuxay go’aanka isimada, duuduub baan u soo dhoweeyey aniga oo ah madaxweynaha mandaqadda SSC. Kii horena waan soo dhoweeyey, aniga oo ka digay in la diido, wixii ka dhashayna waynu aragnay.
Waxa aan ku baaqayaa in aan go’aankan sinnaba looga hor imaan oo la teegeero. Waana in si dhakhso ah loo fuliyaa waxyaabaha uu tibaaxayo, ee ay ugu horrayso in ganacsatada loo madaxbanneeyo horumarinta marsada & in dhaqaalo lagu kabo degmada sida bayaanka ku xusanba. Sidoo kale, sida ku xusanba bayaanka isimada, waa in wasaaradaha & hay’aadkii caalamiga ahaa ee laga wareejiyey Boosaaso dib loogu soo celiyaa. Waliba waxa aan ku dari lahaa in xarunta baarlamaanka loo wareejiyo Boosaaso.
Waxa aan ka digayaa in laga hor yimaaddo go’aanadan ay isimada Bari gaadheen. Haddii laga horyimaaddo waxa ay keeni kartaa in Puntland ay gobol gobol & degmo degmo u kala furfuranto.
Gunaanadkii, waan bogaadinayaa go’aamada ay mar labaad gaareen isimadu, waana in sidooda loo fuliyaa. Wbt.
Mid kale dakada waa in laga wareejiyaa imaaraadka taliyaha waa in loo daayo xafiiskiisa guul gobonimo
Diinta Islaamka waxaay na fareeysaa in aan tan dhibka yar qaadano 2 dhibaato oo noo gudboonaaday!
Marka, waxaan qabaa in arrinta Ilma Diyaano iyo Deni ka dhex taagan dagaal lagu xalliyo in aay dhaanto tan aay Odayaashu gooyeen, hadduusan jirin xal kale oo laaban!!!!
Waaba kasii dartay.
Ma anaan garan in meesha gacmo badan,ujeedooyin badan,darafyo dhowr ahi Ku adeeganayeen PSF????
-Maxaa dekedda iyo heshiiska dawladdu kula jirto Dp World inay isimo ka go’aan gaaraan keenay?
-Baarlamaankii miyaa ayaku?
-Haddii waxba kama jiraan lagasoo qaaday xil ka qaadistii agaasimaha PSF,lana yiri asagaa sii joogi maxay tahay nidaamka dawladeed ee meesha ka jiraa?
-Isimada ayaa meesha ka dawlad ah,ee baarlamaanka,xukuumaddu meesha ha banneeyaan marka.
Isma lahayn meeshu sidan ayay gudaha uga fool xuntahay,una tahay fawdo iyo maamul la’aan!!!!
Hadaaba inta kuraastii Deni lays Barbara dhigtay la go’aamiyay wax aan baarlamaankii maamulku samayn asagoo awoodaas leh.
Ar.Ara jaajida aad sheegaysaa waa kuwii adoo buuryada lulaya dharka kuu xirayoo dad kaa dhigay hawiyana kaa celinayey ilaa laas abuurkii.isamada go’aankoodu waa muqadas isagaana la raacyaa hadii aad diididna is arag damboo xiisa leh. waxaad rabto soo daa.
Saciid Cabdullaahi Deni waa furan labo waddo in uu mid qaato..
1-in uu iscasilo oo meesha uu banneeyo Odayaashaan fowdada wada oo doonayo in ay burburiyaan Puntland
2-in uu galka seefta kala baxo oo igu horreyn surka kaga jaro Burhaan maryo badane ka dibna ciyaal butaano diyaano ku dhex qowraco Xarunta PSF ee Bosaaso.
Talo goyntaanu ma aha talo ay lasoo shir tagi karaan rag masuuliyiin ah ee loo gacmo galiyey in ay toosiyaan mustaqbalka puntland.
Lagaray hadii ilmo diyaano loo daayo PSF hadii ay ka fuqi waayeen si xasiloonida loo ilaaliyo….. laakiin qodobka 5-naad ayaaba noqday ka dar oo dibi dhal. Ma waxay soo jeediyeen in tuulo kasta ay hadhowto tiraahdo anaa iska leh canshuurta aan bixoyo. Anigu waxaan tala jeedintaan u arkaa talo buuryaqab ee ma aha mid loogu daneynayo puntland ama lagu fordaaminayo marxaladaha ka jira puntland.
Qodobka 3xaad qiil ma leh waayo sharci islaam iyo mid kaleba waxaa talada iyo amarka ugu dambeeya leh madaxweynaha oo waxay ahayd in Diyaano amarka adeeco oo uu sababin gacan ka hadal. Eeduna waxay tahay korkiisa.
Qodobka 4-raad macquul ma aha wakhtiga xaadirka ah. Waana arin u taala dowlada. Hadii ay kooxdaanu rabaan in ay dakad dhistaan ha xaar xaartaan goob cidla ah sidii reer mudugu sameeyeen.
Dakada boosaaso waa dakad qaran oo cid gaar u yeelan kadha ma jidho. Weyna ka facweyntahay beelaha ku badan boosaaso.
Qodobka 5-aad waan ka hadlay.
Qodobka 6-xaad isna waa jahawareer cusub. Sidee ayey bosaaso u yeelan kadhaa wax kasta. Ma ayada kaliya ayaa dalka ka jidha. Waxay boosaaso leedahay eroboor caalami ah iyo dakad noqon kadha dakadaha dunida ugu mashquulsan. Sheekadu waxay u egtahay nin wax haysta wax haloogu daro.
Waa arin fiican in shaqada iyo xarumaha dowlada iyo wasaaradaha lagu baahiyo dagaanada oo idil si bulshadu u bulaalto, laakiin jeebka haloo sii buuxiyo nin dhargey ma aha macquul. Waana arin keeni kadha mustaqbalka kalafogaansho iyo catow.
Calaa iyo kuli xaal taladaanu ma aha talo lagu dhaqi karo dal iyo dad. Waa talo gees ka socota oo lagu daneysanayo.
Wadanku waxuu leeyahay dowlad ay dadkeeda oo idil soo dhisteen ma’na la aqbalayo in qoys ama reer ama dagaan gaar ah si gooni ah ugu danaysto.
Waxaan Deni kula talin in uu si buuxda ula wareego talada wadanka.
Hadii shaqsi kasta ama koox kasta ee hinaasta laga yeelo damaca ay wadato waxaa shaki ku jirin in lagu kala dareerin waxii lasoo dhistay.
Waxaad moodaa inaad aqabshay qodobka ugu daran oo ah in Ina Diyaano xoog ku sii haysto PSF, taasoo ka dhigan in la buriyey direetadii madaxweynaha ee xil ka qaadista, waxa dawladi lagu yahay oo madaxweyne dal ku hogaanshaa in amarkiisu fulo, haddii taas la waayo waa meel dawlad iska daayee xattaa asyan jabhadi ka jirin. Haddii la aqablo go’aamda Boqor Burhaan waxay ka dhigan tahay in PL noqotay mamlakad uu Burhaan xukumo.
ahmed somalilander says:
odaygi deni ahaa lagama xishoon.
SH LULE says:
WARKU WUU ISKA CAD YAHAY, IN MEESHA WAX WAYNI KU JIRAAN, OO GACMO KALE KA DANBEEYAAN, KHARASH AAD U BADANA LAGU BIXINAYO. LKN TALO WAXAAN SIIN LAHAA MD DANI, IN AANU UGU DHAQAAQIN DAGAAL IYO NABAD MID TOONA OO UU KA AAMUSO, WAA INUU XOOGA SAARO SIDII FARMAAJO MEESHA LOOGA SAARI LAHAA, TAAS UUN BAA XALKU YAHAY.
Hadalkii oo kooban, reer Bari waa tashadeen!!!
@HILAAC YAA REER BARI AH ADEER ?? MAAXWAYNAHA PUNTLAND AYAA ASALKA BOSASO AH CID KA XIGTANA MALEH WAA HALKUU AABIHIIS IYO AWOOWEYAASHIIS KU DHASHEEN EE HA ILOWIN.
Gaadh haye says:
Ileeeen ceeeb looma dhinto
Meeshaas waxa fadhiya cumar maxmuud islaankoodii iyo 40 oday la socdo
Meeshaa waxa fadhiya ciise maxmuud odayaal
Meesha waxa fadhiyo Faroole Gaas iyo cumar crashiid
Meehaa waxaa lagu xukumay
Reer bari caqligooda awalba waan ogaa waa boqortooyo iyo in ay gumaystaan
Talo ku. Socota Dani inuu is xoreeeyo Puntand na Xoreeyo
Ana inuu is casilo wax uga dhexeeya ma jiraan Wajiga ilaahay
Boosaaso waxay ku kodhay oo ku bulaaltay oo xaadirka ku nooshahay puntland ee puntland kuma noola boosaado. Dakado dabiici ah oo xisaab lahayn ayey puntland awalba layd, oo hadii(1991) laga maarmiwaayi lahaa la hirgalin lahaa dakadahaas.
Laga bilaabo Las Qorey ilaa iyo Garacad waa wada dakado dabiici ah oo asalkii hore la isticmaali jirey. Waxaan reer boosaaso kula talin in aysan nasiibkooda iska ciideyn. Ha ogaadan in dalku yahay wada dakad oo qoys kasta taagan karo dakad uu gooni u leeyahay.
Dawladnimada iyo ka dambeynteeda ayaa dan ugu jidhaa boosaaso. Odayaashaan daneystayaasha ah yeysan dadka seejin dantooda guud.
warka isimada ka soo yeeray waa in la qaataa waayo go”aankii hore ee lagu diiday wuxuu dhaliyey waa la ogaa oo dowladu isimo loo yaqaan bugaanbugta ayey tiri ka daba hadla deetana dagaal ayey qaaday wixii shacab,iyo ciidamo ku dhintay waa la ogaa iyo hantidii ku burburtay. waxan qabaa in ay waxbadan xeeriyeen marka loo eego dhibaatada baaxada leh ay dowlada iyo aaranshadaan geysteen. dakhliga ugu badan ee puntland wuxuu ka soo xeroodaa dekada bosaaso iyo magaalada boosaaso waana 80%. iyadiina waa la dayacay oo weliba shacabkeedii dagaal ay aaranjaan soo qaaday lagu laayey.
faroole hayadihii oo dhan wuxuu u soo raray garowe. si ku tala gal ah. booska banaan ee garowe waa labaatan kun, booska banaan ee boosaaso waa afar kun.
cabdiweli gaas lacagtii imaaraadka uu ka soo qaatay qayb madaxtooyada gaalkacyo ayuu ku dhisay, qayb ta kalena airborka garoowe ayuu ku daray, qaybkalena waa lacagtuu ku bilaabay dekada garacad. hadal iyo dhamaantii boosaaso waa dulmiyey xaqii aayase u daahiray maanta. runtii waxa hada ii daaran heestii ahayd ” maantoo kale madaxaa na furan”
Waxna haka mashxaradin. Puntland xoog bay isticmaashaa markii xaal kale la waayo.
Waxaa lawada filayey in odayaashu keenaan talo lagu qanci karo maadaama tii hore ka qaloocatay.
Awal waxay keeneen talo cadow. Hadana waxay keeneen talo doqon.
Orodoo kaluunkaaga iska cun caqli meesha kuma hayside. Oo waxaad ku heestaa sidii dumarkii “kululoow kaluunkii baan jantay”
Boqor kintir waa ka xishoon waayeey isamadii ka kala yimid Sanaag ilaa Mudug. ​Soomaalidu waxay lahaayeen dhaqan ay isamadu goduunka leeyihiin, gartana rag indheer garada jaraan. Waa xaajo ugub in ninkii garta ka kacay uu yiraahdo garta anaa gooyay.
Warqadii tan ka horeysay wuxuu yiri, dikreetadu ha dhaqan gasho walow uu gorgortan damaacinimo kudhisan watay. Maantana wuxuu soo saaray dikreetadii waa wax kama jiraan.
Ugaas Xasan waa isdaba qabtay, oo inuusan dabka sii shidan buu go aan saday sida laga arko warqada.
Markii la ogolaaday in Garacad laga gArab dhiso Bosaso,lana curyaamiyo,teked beeleedna laga doorbiday tekedii maamulku ku tiirsanaa ayaa burburka Pudland laga shaqeeyay.
Is weydii Federaalku maxay u diidanaayeen dhagax dhigeeda?
In teked qabiil keenayso muran iyo kala furfur waa cadayd.
Boosaso iyo Garacad waxay isku jiraan ilaa 1.000km marka sidee isku curyamin karaan dekada garacad waxa loo dhisay in ithobiya lagu xiro o kastamka tuurdibi ee galdogob ay dekad u noqoto marka meel aysan jirin arintu ay kula gashay
Raggii madaxda ahaa we arrin laga sugaayay ma waxakan ayay umadda rabaan inay dhahaan waa xalka shaqaaqadii & amar diidadii shuftada PSF?!!!!!!
War bi’i waaye waa maxay waxakani?
Gaas marku lahaa Puntland qofka xukuma naar buu Ku jiraa ma waxakan ayuu ogaa???
Iblaysyadaan haddaan Puntland laga qaban isimo lahaaninee rajo ma muuqato.
Dhaq dhaqaaqin ciidan baa caawa ka bilowday boosaaso
Cali nagiib baa kusuganahay hada
Baabuurta Tiknigo da ba wareegayso meel walbo
DENI iga gaarsii guryaha ilma diyaano ku jiraan 2taangi iyo 2bm ah haku fasaxo,jiri burhana xabsiga haw taxaabo
Dulinku wuxu ski noolaada inta cidda uu dhiigooda Ku noolyahay u ogashahay.
Qodob mujiim ah ayaa laga hilmaamay qodbada
#In casuumadda,xarumaha dawladu noqotaa Bosaso maadama ay tahay isha daqli ee Pudland.
#In la xiro trked xasaradeedka GARACAD ee lagu curyaaminaayo Bosaso.
Deni haduu ia casilaayo waa lasoo dhaweyn hana aado Xamar oo Pudland faraha ha ka qaado waa bullaaliye.
Deni hadii iscasilo JIRI burhaan boqor masii ahaan doonaa, Garacad afka kaqaad calosha kajiran tahee Boosaso iyo garacad 1.000km ay isku jiraan garacad dhisantay hada eyl iyo laasqoray aa ku xiga ee reer Bari niicdooda cidna uma bahna waxan sugnaa waa in Galan uu isbaro dhigta lamiga isku xira boosaso iyo carmo, lacagta uu ka qadana uu yirahdo waxan ku hormarin carmo
Maanta reer Bari waa u midoobeen aayo ka talinta Bari.
Ciidan daafacana waa heleen marka isma bixin karto Pudland Bari la’aanteed ee haloo hogaansamo awaamiirtooda.
Farmaajo ciyaar mood.
Maamulkii Puuqland meesha laga toogto waa la fahmay.
Isimadii Sanaag iyo Mudug looma joojin xataa waxay la tageen,halka isimka Nugaal uuba ka maqnaa!!!!!
Anagaa iska leh ka talinta Boosaso iyo Bari.
Waa sii kala socotaa isha muuqata Puntland waxana u sabab ah Aaran jaan oo isku koobay dhaqaalihii reer Pudland,noqdayna gafane keligood naaxay,hogaankii reer Pudland doortaana Ku adeegta,kuna gaara danohooda,kuna weerara beelaha kale ee Majeerteen maadaama hore Harti uga quusteen.
In badan tabasho huursanayd ayaa qaraxday,haddaan la saxina waa Puntland waa dhimatay.
Siciid Dani Dan cismaan maxamuud mahayo,Dan Puntlandna mahayo iyo Dan Darood mahayo mid soomaaliweyna mahayo mid Diina hasheeginba..warnoo kala garwaada ninkaan Deni ah?
Odayaashu derbigay horayna u soo taabteen, haddana wax badan oo kale baa u baxay. Saas baa go’aamadan keenay.
War Deniyow kaddaa sidaan imisaan lahayn? War Harti yaabtey war Mareexaan carar war Tanade quested war Ogaadeen Axmed Madoobe iyo Kenya bay ku indha beeleen oo awalba xigmad Daarood kama sugeyn. Wuxuu garan waayey Puntland inay tahay BASE ka Daarood ayagana ilaaliyaan. MD DENI CAAWA WUXUU JOOGAA MARKAAN TABAR HAYEY TALO MAHAYN HADUU DHABTA ARKAYNA TALO MA HAYO. WAA KA XUMAHAY. TALLADA ADAA KU NOOL EE KUGUMA NOOLA.
Correction: Tanade Daarood quusey
Dahir Nur Jama says:
Soomaali Maryooleey runta ma jecla, in badan oo u hadla sida dad Academy ah waa jiraan.
Waxaad ogaataan Jabhad hubeysan,weliba qabiili ah ma dhisi karaan Nadaam maamul oo leh aasaas adag oo leh meel wax laga saxo marka ay wax qaldamaan. Waxaana sahal ah inuu nadaamkaas burburo xattaa haddii uu jiro Toboneeyo sano.
Waa maxay sababta uu burburayo waa qabyaaladda lagu dhisey,qabyaaladduna waa sida Basasha oo kale,dad badan Waxaay u arkayaan in Nadaamkaan leeyihiin jifo gaar ah,sidaas awgeed waxaay isweydiinayaan adinkuna xattaa haddii ay leeyihiin Tuulo yar waxaa imaaneysa Tuuladaan annagaa maamuleyna waxaaba nala yiraahdaa Reer Geed Land!
Dadku waxaay wada difaacdaan marka ay jiraan wax ka dhexeeya islamarkaana ay u siman yihiin.
Qaab darrada uu leeyahay Nadaam ku dhisma Jabhad hubeysan oo qabiil waa u sahal inuu Burburo,waayo waxaa imaaneysa anigoo jifo reer qurac ah,miyaad I xukumeysaa adigoo ah Jifo reer Qandax.
Sideedaba maamul ku dhisma qaab Jabhad hubeysan oo qabiileysan waa dhici kartaa inuu waqti sii jiro waayo Qori jifeysan baa lagu hagaa dadka degaanka,laakiin marka ay bislaadaan >>> xaadaha Objective ah iyo Subjective waa shaki la’aan inuu burburayo Nadaam jabhadeyn ku dhismay.
Eeg Waxa maalinba maalin ka dambeysa ka soo yaacaya micnaha kuleylka ama Uumiga ka soo baxaya Hargeisaland waayo waxaa ka jira waa Nadaam jabhad hubeysan jifeysan ku sameysmey,aakhirka waa burburayaa wuxuuna burburayaa marka ay is waafaqaan ama Bislaadaan Xaaladaha Objective iyo Subjective ah,waa daahi karaan ama waa soo degdegi karaan waxa dhacayana waa isbedel Bulsho siyaasadeed- dhaqan dhaqaale, micnaha Kacaan Dadweyne baa dhalanaya( Popular Revolution),mana jirto cid is hor istaagi karta waa hubanti taas.
Go’aan kaan ma ahan mid ka soo baxay caqli saliima oo fiyow ee waa dad cuqdadaysan oo hogaamiye uu u yahay burhaan baduugaaye oo ka amar qaata vila soomaaliya waana fidno abuur oo wuxuu hor dhacay isimadii xaalda u tagay in ay si qabow u dhameeyaan ,
DAHIR NUR JAMA
waxaan marar badan arkay dad ku andacoonaya in ay puntland loo dhisay hab beeleed oo aysan sal ay ku istaagto yeelan karin.
Arinka ah in puntland ay dhisteen beelo ku bahoobay isir wadaag waa dhab oo muran kama jiro. Waana sax in umada wada isir kasoo jeeda ay yeelato maamul u gaar ah oo matala umada gayigaas ku nool. Mana aha wax dunida ugub ku ah oo ingiriiskii na gumeysan jirey ayaa u kala dagan oo kala leh maamulo beeleedyo. Mareynkanka waa sidaas oo kale oo state kasta waxaa iskaleh beel ka mid ah beelaha reer yurub. Hadii dowlad beeleedyo burburayaan waxaa burburi lahaa kuwa kor ku xusan.
Laakin waxaan halkaan xujo ugu salaxayaa in uu noo sheego DAHIR(madaama uu isku sifeeyey mutacalim) habkii gayiga puntland maamul loogu sameyn lahaa ayadoo aan la tixgalin ama xisaabta lagu darin beelaha gayiga ku nool. Ma qowm jaan ayaa lasoo uruurin lahaa oo maamulka dhisi lahaa. Mise xoog baa lagu maquunin lahaa oo maamul qalaad ayaa korka looga keeni lahaa sidii gumeystihii. Bal maankaan guracan meel u dhig.
Daahiroow xujada kasoo bax ama afkaaga xiro oo mar dambe hasoo hadal qaadin maamul ay dhisteen beelo walaala ah oo isku isir ah.
Hal arin ayaan kuu xaqiijin. Puntland wey ka sal weyntahay sida aad mooday. Oo labo boqo oo will oo guri ardaagiis ku dhex jira ma dumin karaan puntland. Hal madfac oo lagu hago ayaa ku filan. Waa hadii go’aankaas la qaato. Laakiin ayadoo aan go’aankaas’ba la qaadan ayey iskood u kala dareerin oo bulshadooda gees ka racin marka ay garowsadaan in huu-haadii lagusoo shubay aysan gayigaan ka shaqeynahayn.
Odayada dhaqanka waa laga qadariyaa gayiga puntland. Waxaana bulsho ahaa laga wada siman yahay in caqli caaqil ku jiro oday dhaqmeedka oo sidii awal la arki jirey keenayo talo dhaxgal ah oo lagu wada qanco.
Arinka hada dhacay waa arin ugub oo arlada laga aqoon oo laga filahayn isim. Inkastoo ay isimadaasu yihiin dowr shaqsi oo danu walaaleysay oo aysan matali karin ama buuxin karin booska isimada guud ee gayiga balaaran ee puntland.
ALHAMDU LILAAHI RABIL CAALAMIIN
GUUL ISIMADA QAYBTOODA.
OUR VOICE MATTERS:
RA’YIGEYGA “ILMO DIYANO WAXAY KHATAR KU YIHIN JIRITANKA UMADA REER PUNTLAND WAXAAN ISLAHAA MA ISIMADA BAA LAGU BEEN ABUURAYAA WARQADAN HADAY DHAB TAHAY WAA XAL HADAY DHOWDAHAY IN LA XALIYO DENI IYO ILMO DIYANO XINKOODA JILIBKIISA AH QARDHO AMA BOSSASO HA ISKUGU TAGEEN XAL BAAN OGA FADHINAA AMA DENI HA BANEEYO AMA DAGAAL DHEXDOODA KALI AH PUNTLAND IYO HOROMARKEEDA UMA ISTAAGEYSA JILIBKA REER DENI IYO ILMO DIYANO.
HADA WAXAAN SUGEYNAA MADAXWEYNE DENI WAA INUU BOSSASO IYO QARDHO TAGO XALNA KEENAN INTAAS BAA LOOGA GUDBAYAA ILMO DIYANO IYO DENI.
WAXAAN SI AAD AH U SOO DHAWEYNEYNAA QODOBKA 4aad WAXAA KU TALIN LAHEYN WALIBA IN SI DEG DEG AH DP WORLD LOOGA QAADO WAA IYAKAA JABIYEY HESHISKII “THEY BROKE THE AGREEMENT” SHAQADAAN WAXAAN OGA FADHINAA INA JIBRIL WAANA OUR GAIN AMA FAAIDADEENA WEEYE DEG DEG IMPLEMENTATION KEEDA BAAN IYADANA OGA FADHINAA PARLIAMENT GA PUNTLAND “NULL AND VOID DP AGREEMENT”
BOSSASO IS VERY STRATEGICALLY LOCATED PLACE ON THE PLANET EARTH ANAKANA DHISANEYNA WALIBA WAA IN LAGA QAADAA AIRPORT KA BOSSASO AS WELL WAA QALAD.
ALHAMDU LILAAHI RABIL CALAMIN MAANTA ISIMADA PUNTLAND WAXAY U HIILIYEEN “BOSSASO DEQA” WAAD OGTIHIIN BIN ZAID INUU IMAN JIRAY “BENDER QASIM” XITAA AWOOWAYAASHAAD XOOLO WAA TAARIIKH JIRTA QARNIGII 18aad MAANTA ILMO BIN ZAID OO MUNAAFAQIN AH KAMA YEELENO IN AY BOSSASO DEQA BANDER QASIM BOOS CELIS U HEYSTAAN “THEY NEED TO FUCK OFF” BERBERA INAY KULA CHALLENGE GAREEYAAN DORALEH OO DHUL SOMALIYEED OO DJIBOUTI 🇩🇯 BAA LAGA DIIDAY MARKII LAGA QAADAY ANAGU WAA RABNAY INAY BOSSASO WAX KA QABTAAN OO GAAS IYO TEAMKIISII WAY DADAALEEN INAY “INVESTMENT” WAX KA HELAAN EEDNA MA LEH ANAKA AYAA DHISANEYNA OO MAANTA WAXAA LA HELAYAA SHIRKADO MAXALI AH SIDA SHIRKADA “WADAAGSIN” LAASQOREY IYO EYL NA WAANU DHISAN KARNAYNAA PUNTLAND DHAQAALAHEEDA IYO INFRASTRUCTURE KEEDA WAA IN WAX WEYN ISKA BEDELAA 5ta SANO EE SOO SOCOTA. WAAD OGTIHIIN WADADOOYINKA WADADA ISKU XIDHA BOSSASO IYO GALKAYO SIDAY U BAABA’DAY WADADA ISKU XIDHA CEERIGAABO IYO IYO CEELDAAHIRNA WAYNU DHAMEYNEYNAA INSHA ALAAH WIXII ISCAYRSANAYA SHIDADOODA ILAAHAY BAR BAR HA NAGA MARIYO. BISMILLAHI RAHMANI RAHIM.
XINKA REER BOQORNA SOO AFJARA SI NABAD GELYO AH SHAATIGA SHAYDAAN KANA GACAN ADAG ISKAGA QABTA OO UNUUNKOODA TABEELE YAAL HA LA SURO SI QOFKII MUSLIM AH OO SOO AGMARANA DHAGAX UGU DHUFTO. HABAR GIDIR IYO MAREEXAAN NA WAYNU DAAWANEYNAA HADAY MAR LABAAD DOWLAD NIMADA UMADA SOMALIYEED CEEL KU RIDAAN “WE DID OUR DUTY OO HADAY TAASI DHACDO WAA IN DADKANAGA LOO DIYAARSHO GO’ITAAN DHAB AH.
PUNTLAND CAYAAR KUMAY IMAAN DHIB IYO SHIDO BAA LOO SOO MARAY IN LA DHISO 1993, 1998 WAAD NA OGTIHIIN DHIBAATADA BILAABASHADA SHAATIGA SHAYDAAN KA IN SNM KU BILOWDAY MUJRIM KA HABAR GIDIR EE HASSAN DAAHIR AWEYS OO ISAGOO HUVEYSAN OO HARGEYSA LAGA SOO HUBEYEY INAY BOSSASO DEQA SOO DHEX ISTAAJIYEEN WAXAANA KU NAF WAAYEY MASHRUUCAN SHAATIGA SHAYDAAN KA 15243 QOF WAXAA KU BARA KACAY 68752 KUN OO QOYS WAXAA KU BUR BURTAY HANTI GAAREYSA $18 BILYAN OO DOLLAR WAA WAX QORAN INTAAS DHIB IYO SHIDO AH WAYNU DULQAADANAY IN SOMALIA 🇸🇴 HAGAAGTO BAYNU U LAQNAY OO WAA KAA MAANTA GOBALKA SOOL TAAGAN YAHAY 1998 SAAX MAYGAAG QABIIL LA’ISKU DILAYO “ENOUGH IS ENOUGH”
OGSOONAADA QOFKII DANBI KA GELA PUNTLAND IN LOO QABANAYO MAALIN OO WAAD OGTIHIIN INAYNU HAYNU LISTS KA KUWA LA QALDAY EE LOO ADEEGSADAY DADKOODA “XITAA WAXAYNU HAYNAA KUWA HAGARDAAMEEYA PUNTLAND LIST GOODA IS JIRA HADA WAXAAN WADNAA OO CIIDAN KA ILMO DIYANO INTII MAALIN TII DHAWEYD DAGAAL KA KAQEYB QAADATAY 80% COMPLETE LIST GOODA WAXAAN KALOO WADNAA DAGAAL KII SAAX MEYGAAG RAGII IYO DUMARKII “DHULBAHANTE IYO CIISE MOHAMUD EE KA QEYB QAATAY WAXAAN KALOO HEYNAA OO HELNAY “HORGALE YAASHA TELECOMMUNICATION KOODII IYO BUUFINTII AY QEYB TA KA AHAAYEEN EE KICINTA DHULBAHANTE BULSHADEENA AY BAABASHEEN EE DAROOGADA KHAMRADA IYO AIDS KA KU BAABA’SHFEEN LIST GOODA OO COMPLETE AH BAYNU HELNAY LOCATIONS KOODA WAANA LOO QABAN MAALINTEEDA INSHA ALAAH IS JIRA REER PUNTLAND WALAAHI BAAN LAISKAGA HAREYN NINKII DADKANAGA DHIBAATEEYA AMA DHIBAATADOODA IYO HAGARDAAMEYTOODA KA SHAQEEYA. INSHA ALAAH PUNTLAND WAYNOO HAGAAGEYSAA XINKAN WUU DHAMAAN PUNTLAND NA WAY JIRIN WAYNA JIRI DOONTAA CIDA KU FEKEREYSA IN PUNTLAND BUR BURTO WAXAY SUGIN ILAA QIYAAMUHU KA DHACO.
RIYADEENA PUNTLAND WAY RUMOOMIN WAYNA DHOWDAHAY ILAAHAY BAA INA DHIGAY “THE MOST STRATEGICALLY LOCATED PLACE ON THE PLANET EARTH RED SEA AND INDIAN OCEAN” WAANA ARKI DOONTAAN PUNTLAND OO NAFSI BAXDAY BOSSASO DEQA OO DHISAN, LAASQOREY OO DHISAN, EYL OO DHISAN, GARACAD OO DHISAN, BARAN OO INTERNATIONAL AIRPORT LEH, GALKAYO OO INTERNATIONAL AIRPORT IYO 3G CORRIDOR OO COMPLETE AH, GAROWE OO CAASIMAD CAALAMI AH OO SI WANAAGSAN LOO DESIGN GAREEYO, LASANOD OO INTERNATIONAL AIRPORT LEH LOO TAALADII SIYISKUNA KA TAAGANYAHAY, MAGAALADA TAARIKHIIGA AH EE TALEH EE AASAN OO SI WANAAGSAN OO DALXIIS U DHISAN, MAGAALADA CEERIGAABO OO OO INTERNATIONAL AIRPORT LEH ETHNIC CLEASINGNA UU DIB DANBE SNM UGU HUNGURI YOON DOONIN IYO MAGAALADA TAARIKHIGA AH EE QARDHO OO INTERNATIONAL AIRPORT LEH SI WANAAGSAN NA U DHISAN WAA DHOWDAHAY RAJADEENII PUNTLAND QOFKII PUNTLAND DANBI KA GELA INAAN LA ISKAGA HAREYN RUMEYSO AMA HA RUMEYSAN ADIKAY IDIN JIRTAA LAKIIN WAA BALAN AYNU QAADNAY ISKAMA IMAAN PUNTLAND DAD BAA QABUURAHA UGU JIRA INAAD NABAD GELYADA IYO HORUMARKA AAD MAANTA HIIGSANEYSAAN INAAD HESHAAN MARKII KOONFURTA LAGA SOO BOQDAY IYO MAANTA IS BER BER DHIGA WAA KAA ODAYADEENA HALGAN KOODII RUMOWBAY OO PUNTLAND NA DHISAN TAHAY DOWLAD NIMADII SNM IYO USC GODKA KU RIDEENA CEELKII KA SOO SAAREEN SHAQADEENU WAA INEYNU KA DHABEYNAA RITADOODII “NAFSI SAARIDA PUNTLAND” GAMAHIIR AAN WALIGEED HAL MASHRUUC LAGA FULIN DEKEDA QABYADA AH EE BOSSASO DEQA IYO WADADA HALKA LINE AH EE BAABADAY AAN AHEYN. WAAD OGTIHIIN IN DADKANAGA DHIBTII KU DHACAY QARNIGII 18-19aad IYO 1884 EUROPEAN CURSE DHIBKII DADKANAGA KU DHACAY OO WAA TAA MAANTA EYL IYO TALEH WALI AASAN YIHIN OO MAGAALOOYIN KALE OO BADAN WAAD OGTIHIIN BEESHA DAAROOD DHIBKA UU U GEYSTAY GUMEYSTIHII MORONS KA AHAA 1.2 MILLION BAA NAFTOODA U HURAY SI AAN QOF SOMALI MUSLIM AH LOO ADOONSAN WAAD ARAGTAAN SIDUU DHULKII DAAROOD U KALA QEYB SHAY IYO SIDA UU U KALA DHANTAALAY DADKA DAAROOD AND HISTORICAL MISTAKES KA AH AY UK 🇬🇧 NAGA GESHAY DHULKII QEYB HOOS GEYSAY ETHIOPIA 🇪🇹 QEYB HOOS GEYSAY KENYA 🇰🇪 MARKII MILITRY GII SOMALIYEED NA EE DOWLADII SIYAAD BARE HOGAAMINAYEYNA RAADISAY AY RUSSIA 🇷🇺 AMA SOVIET UNION MADAXA NA JEBISAY OO HAL ASBUUC 6000 OO WIIL OO SOMALIYEED DISHAY DHABARKA KA TOOGTEEN. WAAD OGTIHIIN MARKII LA DAMCAY IN SI KALE WAX LOO XALIYO REGIME KII INUU DAD HOOS UGU SOO NOQDAY OO KU SUMEEYEY PUNTLAND OO XITAA AAN LA SOO HADAL QAADIN “HALABJA OF SOMALIA 🇸🇴 REGIONS SOOL MUDUG AND NUGAAL 1019 DIED POISONED 🤢 HAL MAALIN XABAALO WADARED LAGU AASAY” WIXII DHACAY 1991 EE HAWIYE UGU WALQALAY DIBIRGOYNTA DAAROOD OO AAN WALI LAGA XISAABTAMIN IYO BILAASHADA SHAATIGA SHAYDAAN KA AY SNM IYO USC KU BILAABEEN MUJRIM KA HABAR GIDIR EE HASSAN DAAHIR AWEYS ISAGOO HARGEYSA LAGA SOO HUBEEYEY LA SOO DHEX ISTAAJIYEY BOSSASO DEQA MAGACA “AKHWAAN” IYO SIXIR KII WAXII AY UGU YEEREEN TAXLIILIN EE BIYAHA SIXIRKA IYAKU WAY KU FAANAAN LAKIIN ANAKU WAYNU KA XISAABTAMEYNAA OO WAA BALAN AYNU QADNAY ISJIRA QOFKII DANBI KA GELA DADKA IYO DEEGAAN KA PUNTLAND WALAAHI BAAN LOOGA HAREYN HE/SHE WILL BE HELD ACCOUNTABLE” KUMANAN BAA NAFTOODII UGU QAALISANEYD IDIN HURAY INAAD NABAD GELYADA AAD HEYSATAAN AAD KU NOOLAATAAN CADOWGIINU WAA BADAN YAHAY WAANA WAHIYO BADAN YAHAY TUSAALE WAXAA IDIN KUGU FILAN “GOODAX BARE” DOWLADII DHIBKAAS LOO SOO MARAY INUU KU DHIBAAYO CARUURTA REER PUNTLAND IS JIRA CADOWGIINII WALI KAMA TANAASULIN INUU DADKANAGA DHIBAATEEYO ADKEYSTA AMAANKIINA HIRUMARKIINA KA SHAQEEYA PUNTLAND IS HALF OF SOMALIA 🇸🇴
Car na Galadu waa Gooddi iyo hadal Goloofeede!
Guryaheena oo kala fog baad nagu Galeeysaane!
Godbo Eyl haddii aanan fadhiyin nooma Gabaydeene!
Wax guddoonku noqon lama ogee Garacu muu joogo!
Gadaal muu hubsado talada yadu waa wax Guda weyne! (Sayidkii)
War dadka halkan ku soo burqaday ee mooday in aay Puntland ku burburtay ama ku burbureeyso baaqan aay Odayaashu reer Bari ku dhawaaqeenow, Gadaal hubsada talada Puntland waa wax gudo weyne!
Waxaan halkan ka arkaa qaar badan oo naqdinaya Dekedda GARACAD! Kuwaa Waxaan leeyahay, Soomaaliya dad baa jira doonayo in iyadoo nool nolosha lagu aaso, Dekedda GARACADNA waxaay kamid tahay astaamaha cadaw kasta u muujinaya in aay weli nooshahay oo aanan nolol lagu aasi karin! Tan labaadna, Soomaaliya waxaay u baahantahay ugu yaraan 10 dekedood oo aay khayraadkeeda ka dhoofsato haddii aay Dal ahaan u sii jirto, GARACADNA waa mid kamid ah kuwa ugu Booska wanaagsan!
Wixii ka dhaca Gobolka Bare ee dagaal ah, waxaa ka masuul ah, BOQORKA bililiqada ah ee aan xaqqa kursiga ugu fadhiyeen reer PUNTLAND.
BOQOR BURHAAN waa fidmo wade. Hadhow hadii la xasuuqo ilma DIIYAANO, ha ogsonaadeen adeerkood BURHAN aa xasuuqay..
DENNI ma laha PUNTLAND.. PUNTLAND waxaa iska leh dhamaan shacabka PUNTLAND. Burburinta PUNTLAND iyo ILMO DIYAANO.. hadii ay joogto, waa in la cirib tiraa ILMO DIYAANO iyo BOQOR BURHAAN.
Naga dhex bax oo ha nagu diggin….
Garacad wax khatar ah ma uga imaanayso Bosaso waayo ma Ku taallo magaalo leh,guryo,ganacsiyo,hoteelo,jidad badeecaduhu maraan,waana deked macmal ah ee reer Bari iimaanka haysku ceshaan,xasadka ay Ku caanka yihiin,cuqdada,cadow kalkaalnimada,is xejinta isha daqli ee reer Puntland ha joojiyaan.
Iga walle haddii laydinka guuro oo aad Ku qasabgaan intaas oo dekedood ayaa la hawlgelin,Bosasona waa iska curyaamin.
Reer Nugaal Berbera ayay Ku xirmin,Mudug Garacad baa u shaqayn,Sanaag Laasqoray,Sool ayana awalba Berbera ayay wax uga imaadaan.
Boqornimada uu sheegàn ha laga xayuubsho Burbaan iyo inta saxeexday warqadaan.
QOONDO HA LANOOGA JARO DAQLIGA BOSASO ANNAKAA ISKA LEHEE!!!!
Bosaso aan ku dhisaynaa!!!
Gunno dawladu hanoo qorto maa la dhaho?
Wiilasha ilma Diyaano xaajadu waa ka sarraysay,waana la ogyahay cidda tiri ha wareejin xilka.
Maanta ayaa ay is muujeen oo damacoodana sheegteen kuwii abaabulay wixii ka dhacay Bosaso.
Qoondo ayay Ku lahaaayeen lacagta PSF oo qaadan jireen,waana midda ay u daafacayaan,oo lacagtaas ayaa la ilaashanayaa.
Waxaan xaqiiqsaday in uu 100% hadalkii HILLAAC ee ahaa in aad Abaarsoland ka soo jeedo run ahaa! Bal fiiri sida uu maxabaada ugu qabo in aay reer Puntland isku baaba’aan!!
Meesha aad ka soo jeedo iyo dhaqankaagu way is leeyihiin!
Futo si kastoo loo dhaqo oo loo nadiifiyo, nadiif ma noqoto oo wixii aay dhiiqi jirtay un baay dhiiqeeysaa!
Waxaan ka xumahay magacooda in aan xuso Dadkaa sharafta leh ee reer BARAAWE, anigoo kaagan bidexda ka laafyoonaya kuu jawaabayo!!!
Saxiib wa runtaa oo qodokaasu waa kan ugu daran. Awalna ma aqbalin oo hadana ma aqbalsani. Waxaan arinka ka wadey hadii lacala Deni uu dan guud u arko oo uu dameer diyaano meesha u dhaafo hadee madaweynaha ayey talada ugu dambysa ka go’daa oo halkaas baa looga harin, ayadoo hubaal ah in aan la liqi karin, oo mushkiladu”na intaas kasii badaneyso oo qooqa iyo kibirka iyo fasahaadka ka imaandoona kooxdaas ay alamtara daafeyso.
أهكذا عرشك يا سعيد؟
سعيد دني: كأنه هو.
الحوار الدي دار بين برهان و سعيد دني المعزول
Mustaf cali says:
LIXDA QODOB AY SOO SAAREN ISAIMADA WAA SAX WAA IN LOO HOGANSAMAA. MARKII XAQIIDA LAGA HADLO 23 SANO AY PUNTLAND JIRTEY HOGAAMIYE FIICAN MA SOO MARIN MIDBA MIDKA KA DANBEEYAY WUU KA XUMAA LAAKIIN DADKA REER PUNTLAND AYAA AH DAD AAD U FIICAN NABADA KA SHAQEEYA. ISIMADA HADALKOODA WAA IN LA MAQLAA HADII NABAD LA RABO WAA ISIMADII KA SOO JEEDAY GOBOLKA BARRI UGUNA WEYN BOQOR BURHAAN OO AH ISIMKA UGU SAREEYA AA HARTI IYO KAN DAROOD. WEY KU MAHADSAN YHIIN IMAANSHAHA AY YIMAADEN SULDANKA BEESHA CALI IBRAHIM REER BACIID YAHAY IYO ISLAANKA CUMAR MAXAMUD.